Mianara momba ny fitsipi-pitenenana molecular sy empirical
Ny endriny molekiola dia endriky ny isa sy karazana atôma izay atolotra amin'ny molekiolan'ny sela. Izy io dia manondro ny tena endriky ny molekiola. Ireo fanoratana aorian'ny endriky ny singa dia manondro ny isan'ny ataoma. Raha tsy misy famandrihana, dia midika izany fa misy atoma iray misy eo amin'ilay fitambarana.
Ny formula formula dia fantatra ihany koa ho ny fomba tsotra tsotra indrindra . Ny fitsipika ara-pitsipi-pitenenana dia ny isan'ireo singa hita ao amin'ilay fitambarana.
Ny endri-tsoratra ao amin'ny formula dia ny isan'ny atôma, mitarika amin'ny isa iray isa misy eo anelanelan'izy ireo.
Ohatra momba ny volavolam-panazavana môlekular sy empirical
Ny endri-molekiolan'ny glucose dia C 6 H 12 O 6 . Ny molekiolan'ny glucose iray dia misy atômôba 6, atômôma 12, ary atoma oxygène 6.
Raha toa ka azonao atao ny mizara ny tarehimarika rehetra amin'ny endriny molekiola amin'ny sandany mba hanatsorana azy ireo bebe kokoa, dia tsy mitovy amin'ny formula molekule ny fomban-tsakafo na tsotra. Ny endri-tsoratra ara-tsakafo ho an'ny glucose dia CH 2 O. Ny glucose dia manana boribolan -drano 2 ho an'ny molotra karbona sy oksizenina. Ny endriky ny peroxide rano sy rano dia:
Fichier Molecular Water : H 2 O
Fomba fijerin'ny rano: H 2 O
Famaritana ny molekiolan'ny molekiolan'ny hydrogen peroxide: H 2 O 2
Famaritana ny endriky ny hydrogen peroxide: HO
Raha ny momba ny rano, dia mitovy ny rofia molekiola sy ny ressource empirique.
Fikarohana endrika ara-tsiansa sy molecular avy amin'ny taharo isan-jato
Percent (%) composition = (volomparasy / amponga) X 100
Raha omena ny ampahany isaky ny fitambarana ianao, dia ireto ny dingana ahafahana mahita ny fomban-drazana:
Eritrereto hoe misy santionany grama 100 ianao. Izany dia mahatonga ny fanitsiana tsotra satria ny isan-jato dia mitovy amin'ny isa gram. Ohatra, raha 40% ny habetsaky ny fitambarana dia oksizenina dia manisa ianao manana oksizenina 40 grama.
Amboary ny gram amin'ny moles. Ny formulaire empirique dia ny fampitahana ny isam-bolo amin'ny fitambarana ka ilainao ny mavesa-danja amin'ny môle. Amin'ny fampiasana ny ohatry ny oksizenina indray, dia misy 16.0 grama isaky ny moleky oksizenina ka ny 40 g ny oksizenina dia 40/16 = 2,5 oksizenina.
Ampitahao ny isan'ireo singa ao amin'ny singa tsirairay ka ny kely indrindra amin'ny môle no azonao ary zarao amin'ny isa kely indrindra.
Amboary ny tahan'ny volo ho an'ny antontan'isa akaiky indrindra raha mbola akaiky amin'ny isa iray manontolo. Amin'ny teny hafa dia azonao atao ny mihazakazaka 1.992 hatramin'ny 2, saingy tsy afaka miditra 1.33 hatramin'ny 1. Ianao dia mila mamantatra ny isa iombonana, toy ny 1.333 dia 4/3. Ho an'ny fitambaran'ny sasany dia mety tsy ho 1 ny isan'ny atoman'ny singa iray! Raha ny isa ambany indrindra dia ny efatra ampahatelony, dia mila ampitomboina ny isa 3 isan-jato mba hanaisotra ny ampahany.
Soraty ny raki-tsoratry ny fitambarana. Ny tarehimarika isam-bolana dia ny fampisehoana ho an'ny singa.
Ny fikarakarana ny kininina molekule dia azo atao raha toa ka omena ny volavolan-tsolon'ny molekiola. Rehefa manana ny volavolan-tsolika ianao dia afaka mahita ny tahan'ny haavon'ny masik'ilay vovoka amin'ny volombava empirico . Raha toa ka mitovy (mitovy amin'ny rano, H 2 O) ny isa, dia ny mitovy amin'izany ny formula formula sy ny molecular formula.
Raha toa ka 2 (toy ny peroxide mahery , H 2 O 2 ) ny isa, dia ampitomboina ny isa roa amin'ny formulaire empirique mba hahazoana ny formula molekule. roa.
Mitadiava ny Anônina sy ny Cathode amin'ny Cellwell Galvanic
Karazan-tsavily maimaim-poana - Olana ara-pahasalamana miasa
Famaritana fankaherezana sy ohatra
Lisitry ny Metaly Noble sy Properties
Inona avy ny CD?
Inona no Atao hoe Bibikely Mahavelona Indrindra?
Fanamafisana oram-peo sy tonizika
Inona no fahasamihafana misy eo amin'ny density sy ny gravité manokana?
Hazo Molecular Formula
Fanangonam-pahavaratra mangatsiaka: ny mofomamy tsy hita maso manerantany
Fifandonana tsy misy fiafarany
Mercedes-Benz SUVs sy Crossovers Overview
Ny fiainan'i John Parr
Top Lehilahy ao amin'ny 'Songs' Songs of the '80s
Nahoana no maty ny biby sasany?
Ahoana no ilazanao ny "r" Japoney?
Göbekli Tepe - Ivontoeran'ny kolontsaina tany Torkia
Inona ny Microeconomics?
Raha tianao tahaka an'i Edith Piaf, mety ho tahaka ireo artista sy hira ianao
Inona no fitsipika federaly?
Firy no biby nalaza fahiny?
Top 10 Basemen voalohany amin'ny tantara baseball Baseball
Lesona ho an'ny Fahatsiarovana ny Andro Firavoravoana ary Fomba Fomba Fandresen'ny Fitaovam-piasana farany
Inona no dikan'ny hoe "Grammaticalization"?
Ireo kintana vehivavy rock izay nahatonga ny tantara rock
Fampidirana ny Testamenta Vaovao
Biographie sy Contributions an'ny WEB Du Bois
Ahoana ny fomba fampiasana ny fanontana italiana fombafomba sy tsy ara-dalàna
Elastisite teboka manohitra ny elasticité